वेबसाइटहरू नि: शुल्क GIF फाईलहरू डाउनलोड गर्न क्रिएटिव अनलाइन
जुडित मर्सिया | | पुनरावृत्त, धेरै
हालमा, एनिमेटेड संसाधनहरूले स्थिर छवि भन्दा बढी ध्यान आकर्षित गर्दछ, त्यो हो, कुनै चाल बिना। यो एजेन्डा मा सामाजिक नेटवर्क मा सामग्री को लागी एनिमेटेड GIFs को उपयोग छ।
हामीले पहिले नै एमा सिकेका छौं अघिल्लो पोष्टजहाँ हामी फोटोशपको साथ GIF कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं, जहाँ प्रारम्भिक GIF एक परिवर्णी शब्दसँग मेल खान्छ, यो अंग्रेजीबाट आउँदछ: ग्राफिक ईन्टरचेन्ज फर्म्याट.
1 एनिमेटेड संसाधनहरू
2 GIF नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
5 प्रतिक्रिया GIFs
यो GIF हो महान प्रभावकारिताको साथ संसाधन प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न र राम्रो ब्रान्ड स्थिति प्राप्त गर्न। सामाजिक सञ्जालबाट उनीहरु फेसनदार भए पछि मानिसहरुसँग कुराकानी गर्न मनपराउँदछ छविहरू चल्दै। त्यहाँ उनीहरूको एक विस्तृत विविधता छ, तिनीहरू भाइरल भएको छ र तपाईं सबै प्रकारका पाउन सक्नुहुन्छ।
यसका लागी कम्पनीहरु GIF पनि एक शक्तिशाली उपकरण हो, किनकि यसले उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने अवसर दिन्छ एक धेरै अधिक रचनात्मक, प्रभावशाली र संक्षिप्त शब्दावली। सन्देशहरू छोटो, स्पष्ट र प्रत्यक्ष छन्।
GIF नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
GIF को सब भन्दा ठूलो फाइदा भनेको तिनीहरू बनाउनको लागि धेरै छिटो हुन्छन्, तर त्यो बाहेक हामी फेला पार्न सक्छौं धेरै नि: शुल्क डाउनलोड वेबसाइटहरू। तल हामी साइटहरूको सूची दिनेछौं जहाँ हामी यो ढाँचामा सबै सामग्री सजीलै, द्रुत र उनीहरूलाई केहि पनि भुक्तान नगरी फेला पार्न सक्दछौं।
हामी सुरू गर्दछौं Imgur, यो दृश्य सामग्रीले भरिएको एक प्लेटफर्म हो। यो प्रयोग गर्न धेरै नै सजिलो छ र तपाईंलाई अनुमति दिनेछ सबै दर्शकहरूको लागि सामग्री पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईंले हास्यास्पद छविहरू फेला पार्नुहुनेछ, प्रसिद्ध मेम्स र जीआईएफहरू। यस साइट को सामग्री प्रयोगकर्ताहरु को पोस्ट बाट सिर्जना गरिएको छ जसले यो दर्ता गर्दछ। यी व्यक्तिहरू संसारभरका हुन् जसले राम्रो सामग्री प्रकाशित गर्छन् र भोट दिन्छन्।
यस वेबसाइटले हामीलाई शब्दहरूमा खोजी गर्न मद्दत गर्दछ, वेबमा सबैभन्दा लोकप्रिय सामग्री द्वारा, ह्यासहेग्स, अन्यहरू। यो वास्तवमै उत्तम प्लेटफर्म हो, हामी त्यसका बारेमा बढी कुरा गर्छौं प्रति महिना २ people० मिलियन मानिसहरूले यसलाई ब्राउज गर्दै।
GIFs को सम्बन्धमा सबैभन्दा प्रसिद्ध वेबसाइटहरू मध्ये एक हो GIPHY, यसको महान GIF नाम को लागी सबै भन्दा माथि खडा छ नि: शुल्क डाउनलोड। यो ढाँचा को यस प्रकार मा विशेषज्ञता छ र यो वास्तव मा धेरै कोटिहरु कभर, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ सबै भेट्टाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्न को लागी। दिमागमा राख्नुहोस् कि यो भित्र छ अंग्रेजी, र यसैले हामीले यस भाषामा खोजी गर्नुपर्दछ हामीले अझ प्रभावकारी रूपमा खोजिरहेका सामग्रीहरू फेला पार्न।
हामी तपाईंको खोज ईन्जिन वा कोटीहरू कोटि द्वारा प्रयोग गर्न सक्दछौं। एक पटक हामीले हाम्रा आवश्यकताहरूको लागि सही GIF फेला पार्‍यौं भने, यसले हामीलाई यसलाई प्राप्त गर्न धेरै विकल्पहरू दिनेछ। प्रयोगमा निर्भर गर्दै हामी यो दिन चाहन्छौं:
भविष्यको प्रयोगको लागि यसलाई मनपर्नेको रूपमा बचत गर्नुहोस्।
लिंक लिंक प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
नेटवर्कमा प्रयोगको लागि लिंक प्रतिलिपि गर्नुहोस् (सोशल मिडिया, mp4, आदि)।
एक वेबसाइट वा ब्लगको लागि इम्बेड कोड प्राप्त गर्नुहोस्।
हामी संग जारी छ प्रतिक्रिया GIFs, GIF हरू लाई अभिव्यक्त गर्न प्रबर्द्धनका लागि बाहिर देखा पर्ने एक वेबसाइट। उसको खोजी बाँकी भन्दा बिलकुलै फरक छ, एक शब्द टाइप गर्नुको सट्टा उसले हामीलाई कस्तो लाग्छ वा हाम्रो प्रश्न के हो सोध्यो। यसले हामीलाई हाम्रा नातेदारहरू, GIF साथ साथीहरूलाई जवाफ दिन मद्दत गर्दछ। संक्षेप मा, यी एनिमेसनबाट आफूलाई अभिव्यक्त गर्नुहोस्। यसको धेरै जसो सामग्री हास्यपूर्ण छन्, सबै प्रकारका मुडाहरूको लागि: आनन्द, क्रोध, विडंबना, एक विशाल विस्तृत सूचीमा।
को प्लेटफर्म GIFBin यो थोरै हो बाँकी भन्दा फरक। हामी यो भन्छौं किनकि यो ठाउँ हो जहाँ डाउनलोड गर्नु बाहेक हामी आफ्नै सिर्जनाहरू अपलोड गर्न सक्छौं। यस विधिको फाइदा यो छ कि त्यहाँ छ विचारहरु को महान विविधता, समाहित र निरन्तर नविकरण। यसले पछि GIFs डाउनलोड गर्न मद्दत गर्दछ तिनीहरूलाई हाम्रो व्हाट्सएप सम्पर्कमा पठाउनुहोस्। एक तर्फ, सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएको सामग्रीको शब्दहरू देखाइन्छ, "शीर्ष ट्यागहरू"। यो सत्य हो यस साइटको सौन्दर्य धेरै बढी आधारभूत छ, यो बाँकी भन्दा कम व्यावसायिक देखिन्छ तर यसले हामीलाई उपयोगी सामग्री फेला पार्न र हामीलाई चाहिने चीजहरू प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
हामी कुरा गरेर अन्त हुनेछौं दशैं, GIF मा विशेषज्ञता भएको छवि बैंक तेजी बढ्दै। यसको सब भन्दा ठूलो गठबन्धन गुगलसँग भएको छ, जसले GIPHY सेवाहरू सुरू गर्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ टेनर खरीद.
तपाईंले यसलाई बुझाउनु पर्छ गुगल परिवर्तन पूर्ण रूपमा उचित छ, किनकि GIPHY सँग यसको प्लेटफर्ममा एक जातीय प्रकृतिको सामग्री थियो।
अर्कोतर्फ, प्रयोगकर्ताको रूपमा लाभ कि हामी यो खरीद को लागी धन्यवाद फेला पार्न सक्दछौं। अनुप्रयोगहरूमा GIF छविहरूको यो विशाल फराकिलो क्याटलगको उपयोग हुनेछ, त्यो हो, अनुप्रयोगहरू जति सामान्य WhatsApp हामीलाई निकट भविष्यमा यो सबै सामग्री प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ। टेनरले हामीलाई अनुमति दिन्छ किबोर्डहरू डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईंको सबै सामग्री हातमा छ। यसको उत्पादनहरू दुबै एन्ड्रोइड र म्याकमा अनुकूलित छन्।
हामी हाईलाईट गर्न सक्दछौं, अन्य वेबसाईटहरू जस्तो कि टेनर हाम्रो खण्ड श्रेणी द्वारा GIFs, धेरै दृश्य र प्रयोग गर्न सजिलो। एकचोटि हामीले एकमा निर्णय गरेपछि यसले फाइललाई विभिन्न ढाँचाहरू र विभिन्न प्रकारको रिजोलुसन, गुणस्तरमा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, दायाँ पट्टि यसले हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ अधिक विकल्पहरू हाम्रो खोजसँग सम्बन्धित GIF को। तल, सबै प्राविधिक विवरण, त्यो हो, एनिमेसनको सहि अवधि, आयामहरू र सिर्जना मिति र समय।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » GIF को डाउनलोड गर्न वेबसाइटहरू